Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba » Zingu-10% kuphela ezimotweni eziyi-1 billion eziphephe ngempela
Ucwaningo olusha oluvela kwaCanalys lukhombisa ukuthi izici ezithuthukisiwe zosizo lwabashayeli (ADAS) zifakwe ku-10% kuphela wezimoto eziyizigidi eziyizinkulungwane ezi-1 ezisetshenziswa emhlabeni wonke ekupheleni konyaka we-2020. Ingxenye yesithathu yezimoto ezintsha manje ithengisa ngezici ze-ADAS ezimakethe ezinkulu ezifana ne-Mainland I-China, i-Europe, i-Japan kanye ne-US, kepha kuzothatha iminyaka eminingana ngaphambi kokuthi zifakwe engxenyeni yazo zonke izimoto emigwaqweni yomhlaba.
Izici ze-ADAS zifaka phakathi i-adaptive cruise control, i-lane-keep assist, ukubhuleka okuphuthumayo okuzenzakalelayo, nesexwayiso sendawo engaboni. Kusetshenziswa izinzwa namakhamera, lezi zici zingagcina imoto ibanga eliqokiwe ukusuka kwenye imoto ngaphambili, igcine imoto igxile kulayini wayo, imise imoto ukuma okuphuthumayo, ikhombe ezinye izimoto noma abahamba ngezinyawo abasondela nokuningi.
DAS ezimotweni ezintsha kuthengiswa
Izici ze-ADAS ziya ngokuya zitholakala njengezinga elijwayelekile noma njengenketho ezimotweni ezintsha ezijwayelekile nakumamodeli ezingeni lokungena. Njengesibonelo, ucwaningo oluvela kwaCanalys lukhombisa ukuthi i-lane-keep assist feature, okuthi uma ivulwa inikeze usizo lokuqondisa ukugcina imoto emzileni wayo, yafakwa kuma-56% ezimoto ezintsha ezithengiswe eYurophu engxenyeni yokuqala ka-2021, 52% eJapan, 30% e-Mainland China nase-63% e-US. ICanalys ichaze kabanzi ngazo zonke izici ze-ADAS ezifakiwe ezimotweni ezintsha, ngemakethe enkulu njalo ngekota.
“Ukufakwa kwezici ze-ADAS ezimotweni ezintsha kuzoba nomthelela omuhle kwezokuphepha emgwaqeni, kunciphise isibalo sezingozi ngaleyo ndlela kube nokufa kwabantu, njengoba izingozi eziningi zidalwa ukuphazamiseka kwabashayeli noma iphutha. Izici ze-ADAS zisebenza ngokuzikhandla ukugcina abashayeli, abagibeli nabanye abasebenzisi bomgwaqo bephephile, ”kusho uChris Jones, oyiChief Analyst yezimoto eCanysys. “Kepha ngenkathi ukungena kwalezi zici zosizo lwabashayeli ezimotweni ezintsha kukhula ngesilinganiso esihle, uma kubhekwa ukuthi isilinganiso semoto esetshenziswayo sineminyaka engaphezu kwengu-12 ubudala, futhi kuzothengiswa izimoto ezingaphansi kwezigidi ezingama-75 ngonyaka ka-2021. eminyakeni eminingi ngaphambi kokuthi ngisho nengxenye yezigidi zezimoto ezisetshenziswayo emhlabeni wonke inezici. ”
I-ADAS ku ebhalisiwe izimoto ezisetshenziswayo
“Ekupheleni konyaka we-2020, abakwaCanalys balinganisela ukuthi bekusetshenziswa izimoto eziyi-1.05 billion emhlabeni jikelele. Kodwa izici ezibalulekile ze-ADAS zifakwe kuphela cishe ku-10%, ”kusho uJones. “Uma kucatshangelwa ukuthi inani eliphelele lezimoto ezisetshenziswayo lihlala cishe esigidini esisodwa sezigidi kule minyaka eyishumi, leli yithuba elihle kakhulu lesikhathi eside labenzi bezimoto ikakhulukazi abahlinzeki babo nabalingani be-ADAS. Izimoto ezingama-900 million ezisemgwaqeni njengamanje azinazo izici ze-ADAS.
“Ukufaka kabusha izici ze-ADAS ezimotweni ezindala akuyona inketho - izinzuzo zokuphepha kumele zize ngezimoto ezintsha. Ithuba le-ADAS kule minyaka eyishumi ezayo nangaphezulu likhulu kakhulu, ”kusho uSandy Fitzpatrick, uVP eCanysys. “Umnotho wesikali uzokwehlisa intengo yezinzwa ezidingekayo ku-ADAS, kodwa yize kunjalo, iCanalys njengamanje ibikezela ukuthi cishe kuphela u-30% wezimoto ezisetshenziswayo ezizoba nezici ze-ADAS ngonyaka ka-2025 kanye no-50% ngo-2030. njengokujwayelekile kuzo zonke izimoto zabo ezintsha, ngaphandle kwemali ekhokhwayo enkulu, bazoba nethuba lokuncintisana. ”
Ukufakwa okuphoqelekile kwe-ADAS ezimotweni ezintsha kuzosiza ukwandisa ukungena. Izikimu zokuqhafaza ukususa izimoto ezindala, ezingcolisa kakhulu, nezingaphephile emigwaqeni nakho kuzosiza. Kepha ukuxhumana okunamandla, ukukhiqizwa kwesidingo kanye nemfundo ngezinzuzo ze-ADAS kungukhiye - abathengi kudingeka babheke izimoto ezine-ADAS, izici kufanele kube lula ukuzisebenzisa, kumele bathuthukise bangavimbeli ulwazi lokushayela, futhi abashayeli kumele bathembe futhi basebenzise izici.
Ngeshwa, ngokushoda kwezinto zakamuva kanye nomthelela wobhubhane, imboni yezimoto ibhekane nokuphazamiseka okukhulu ezinyangeni eziyi-18 ezedlule. Ngezikhathi ezinde zokulinda izimoto ezintsha, imakethe yezimoto esetshenzisiwe ibe nokuqashiswa okusha kwempilo. Ngezibalo ezingaphansi kwe-ADAS ezimotweni ezisetshenzisiwe, ukukhula kokungena kwe-ADAS kuzothinteka esikhathini esifushane.